Ogaden News Agency (ONA) – Xog Muhiima: Marinka Bar Bara & Wadada isku xidhi doonta Bara Bara ilaa Adis Ababa.
Xog Muhiima: Marinka Bar Bara & Wadada isku xidhi doonta Bara Bara ilaa Adis Ababa.
Posted by Wariye Qaran	/ April 4, 2019
Waxaa in muddo ahba socda mashruuc Waddo isku xidhaya Berbra ilaa Addis Ababa. Mashruucan sida uu hadda u dhigan yahay waxaa ka mid ah in la dhiso wadda labadadhinac isku xidhaysa; In Dekedda berbera La balaadhiyo oo la dayactiro; in Airporka Berbera la gaarsiiyo heer caalami ah, in Airporka Hargaysa la dayactiro lana acasriyeeyo, in Jidka qaybta ku aadan Hargeisa loo diyaariyo habka ugu wanaagsan ee tirada badane Gawaarida aanay magaalada iyo isu socodkeeda wax ugu dhimin.
Waxaa kaloo mashruuca ka mid ah hagaajinta Jidda inta uu si marayo oo idil iyo casriyaynta habka canshuuradaha ee Xadka Togwajale iyo Jigjiga.
Guud ahaan Dekedda Berbera iyo Degaankaas Somaliyeed, muhimad wayn ayay u leeyihiin degaanka Somalida ee Itoobiya hoos yimaada (Ogaden). Ganacsiga ugu bada nee degaanka Somalidana wuxuu ku wajahan yahay am aka yimaada Berbera. Xoolaha ugu bada nee ka dhoofa dekaadaas asalkiisa wuu ka yimaadan dalkan. Sidoo kale badeecada ugu badanee degaanka Somalida timaadana waxay soo martaa Berbera. Marka Berbera muhimad uma laha keli ah Addis Ababa ee ganacsigeeda si gaar ah ayuu dalkeena muhimad ugu leeyahay.
Sidaas daraadeed waddo isku xidha degaankeena iyo Berbera muhimad gaar ah ayay noo leedahay. Hase yeeshee qaabka mashruucan loo habeeyay, waxaa cad inaan tixgalintii ay mudnayd aan la siin degaanka Somalida oo waddo noocaas ah ay saamayn wayn ku yeelan doonto. Saamayntaas oo ay ka mid yihiin:
● dhibaatada kaga iman kartaa cimilada ( dadka, xoolaha, dhirta, Hawada, Biyo shubka degaanka) marka kumanaan gaadiid ah ay u kala gooshaan Berbera iyo Addis Ababa maaliinkiiba.
● Ganacsatada Somalida degaanka oo awal horeba ku dhib qabay inay labada aag ka ganacsadaan ayadoo maalkooda lagu dhaco waa kontroband, ama dalka ha ka dhoofiyaan ama ha soo galiyaan, haddaan weliba dil loogu darin, inay intii u hadhi jirtay la dhaafiyo oo lagaba maarmo.
● In degaanku wax aan qaylo iyo qiiq ahayn aanay ka faa’iidayn mashruucaas oo markii aan derisnay dokumentiga barnaamijka aanan la kulanay ergo Ingiriis ah oo mashruuca wax hirgalinaysaa ay noo sheegeen inay maalgalinayaan oo qudha dhinaca Hargeisa oo qorsha uusan ugu jirin in sida Airportyada Berbera iyo hargeisa aanu qorshu ku jirin ka jigjiga iyo magaalooyinka badan ee jidku sii mari aanay jirin wax mashaariic ah loogu talo galay in laga hirgaliyo.
● Sidoo kale waddooyinka dalka maraya Min Togwajaale ilaa Meiso inuusan jirin mashruuc dadka degaankaas oo ah waxa ay luminayaan u kaba inuusan jirin
In degaanka mashaariic horumarineed laga hirgaliyo way habboon tahay. Mashaariicdaas dhibkooda way wataan, laakiin waxaa daboola in dadka ay khusayso dhibaas wax ay ku badashaan inuu jiro. Dalkeena waxaa kui soo socda mashaariic badan oo ay ka mid yihiin dhuumaha shidaalka ee Jabuuti baa la gayn la leeyahay, Mashruuca Marinka Berbera, mashariic badan oo kale oo soo soctaa. Waxaa nasiib daro ah in waxaas oo mashaariic ah aanay talo ku lahayn dadka ay dalkooda ka hirgalyo, sidoo kale inaan xog ku filan la siinayn dadka ama ha noqoto dowlada Federalka ama degaanka. Adduunka marka mashriic waawayn dal laga hirgaliyo waxaa dhaqan ah:
1. Daraasad dhab ah lagu sameeyo saamaynta mashariicdaas ay ku yeelanayaa cimilada, dhaqaalaha, iyo bulshada degaanka.
2. In dadka lala socodsiiyo saamaynta mashaariicdaa faa’iido iyo khasaare.
3. In taladooda qorsha lagu darsado.
4. In faa’iidada ay qayb muuqata ku yeeshaan.
5. Inay jiraan aqoonyahano madaxbanaan oo iyaguna qiimayn ku sameeya saamaynta mashaariicdaas
Haddaba, waxaa nasiib daro ah in masuulinta Somalida ee heerarka kala duwan Somali uga matala Itoobiya, inay dadkooda la wadaagin xogaha mashaaariicda nolosha bulshada raadadka waawayn ku yeelanaya.
Xataa waxaa jirta tuhum in iyaga laftoodu aanay mararka qaar wax wayn ku dhaamin xogta mashaariicda qaar ka mid ah, haddii ay og yihiin aanay shacabkooda si cad (transparent ah ula socodsiinin).
Mashruucan marinka Berbera, in kastoo aan arkaynay madaxwaynaha dowlad degaanka oo Dhagax dhig ka qayb galaya maagalada Berbera, ma hayno meel dowlad degaanku ay dadkeeda ugu sheegayso saamaynta mashruucaas – khayr iyo sharba.
Warbaahinta degaankuna ma anan arag meel ay kaga hadlayso mashruuca noocaas ah oo muhimadaas u leh Somalida degaankan.
Waxaa sidoo kale arrimahan aan ka hadal wasiirada iyo xubnaha baarlaamka Heer federal oon dadkooda xaqiisa badana aan la arag goob ay ka difaacayaan maa kaga hadlayaan.
Haddii ay dadaal wadaana shacabka aan loo soo bandhigin oo aanay muuqan. Sidoo kale Xisbiga dalkeena xukuma ee hadda uun la unkago, hanaa la leeyahay dalkeenu xukumaa!
Waxaa kaloo dhaliishan wax ku leh Aqoonyahanka dalka u dhashay oo ay habboonayd inay mashaariicda nocan ah daraasado madaxbanaan ku sameeyaan dhinacbana ka eegaan oo dadkooda ay la wadaagaan.
Haddaba waxaa hadda dhamaan dowlad degaanka, waxgaradka, aqoonyahan, masuulinta dowladda federal noogu jira iyo Ururada siyaasiga ee dalka inaan arrimahan si dhab ah uga hawl-galno
1. In Dowladda Federalka, deeq bixiyeyaasha iyo ismaamulka Somalida Hargeisa ay bilaabaan barnaamij lagaga qayb galinayo ka faa’iidaysiga Mashruucaas dadka iyo dalka Degaanka Somalida.
2. In barnaamijkaas si cad loo soo bandhigo.
3. In Guud ahaan ganacsiga Somalida degaanka uu la leeyahay dalalka Somalida nidaam cadaalad ku dhisan loo sameeyo oo laga saaro dhaca iyo dilka ayadoo lagu xalaalaysanayo xoolahooda waa kontrabaan iyo qaabab kale oo aan waxba dhaamin.
4. Tusaalaha la samayn karo, waxaa ka mid ah:
A. in Togwajaale loo aqoonsado dry port oo weliba ay noqto Free port, lana hormariyo
B. In waddada dheer ee Addis u kacasay agagaarkeeda dadka mashaariic looga abuuro
C. In wadooyinka dowlad degaanka ee ganacsiga xooluhu maraan loo abuuro mashaaric ku soo xidhaya wadadan
D. In shirkado ay leeyhiin ganacsatada dowlad degaanka ay kamid noqdaan kuwa wax ka daabulayaa badeecada Itoobiya loo wado
E.In la abuuro bangi Somali ah oo gacan siiya ganacsatada Somalida ee Dalka xoolaha iyo badeecada kale ka dhoofinaya
F. In Airporka Jigjiga lagu daro mashaaricda berbera Corridor
G. In waddada Dheer loo sameeyo goobo nasasho oy dadku ka helaan gacansi sida adduunka kale waddooyinka dhaadheer looga abuuro goobo nasasho iyo kaalimo shidaal si degaankaas loogu faa’iideeyo.
H. In Somalida labada degaan ay si dhab ah uga wadahadlaan wixii mugdi mugdi ah ee saamayn ku yeelan kaara ganacsiga labada dhinac iyo maacaamulka guud.
Ugu dambayn dhammanteen waa inaan dhaqan u yeelano inaan si xor ah uga hadalno wax kastoo nolosha dadkeena samayna. Sidan oo kale Walaalaheen Somalida dhinaca kale waa inay ka hadlaan saamaynta wadadu ku leedahay degaanada ay marayso oy la xisaabtan maamulkooda Somaliland si togan (positive).
Qoraalkana kuma caaradayno in Jidadkaas la dhso ama lag afaa’iidaysto labada dhinacba, laakiin waa in dhammaan dadka ay khusayso ay kawada faa’iidaystaan, laakin waa in dhamman dadka ay khusayoo idil kawda faa’iidaystaan si mustaqbalka aan dhib u abuurmin.
Wixii ka soo kordha arrimahan waan idiin soo gudbin doonaa haddii Eebe idmo. Waxaan ka codsanaynaa dhamaan bulshada, khaasatan aqoonayahan waxa nolosha shacabkooda saamayna.
Xogta mashruucaan qayb ka mid a waxaad ka heli kartaan goobahan: